Israa’iil Oo Qarka U Saaran In Ay Albaabbada Iskugu Dhufato TV-ga Al Jazeera (Warbixin Cajiib Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Israa’iil Oo Qarka U Saaran In Ay Albaabbada Iskugu Dhufato TV-ga Al...
Israa’iil Oo Qarka U Saaran In Ay Albaabbada Iskugu Dhufato TV-ga Al Jazeera (Warbixin Cajiib Ah)
Iyada oo Israaiil adeegsaneysa tuhunka ah in Telefeshinka Aljaziira uu dhiirrigelin iyo taageero siiyo waxa loogu yeera argagixisada ayay waddaa xukuumadda Israaiil go’aan lagu xirayo dhammaan xarumaha iyo xafiisyada Telefeshinka Aljasiira ee ku yaal ama ka howlgala Israaiil.
Sida agu sheegay war ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee Israaiil, Warmurtiyeedka wasaaradda Isgaarsiinta ee Israaiil ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay codsaneyso in la baabi’iyo xeerarka sahqada suxufiyiinta Kannaalka Aljaziira iyo joojinta kannaalada Telefeshinka Aljaziira ee ka howlgala Israaiil, sidaas oo kalana in meesha laga saaro adeegsiga Telefeshinka Aljasiira ee Dayaxgacmeedyada iyo adeegyada uu Telefeshinku ka helo shirkadaha kale ee Berriiga.
Wasiirka wasaaradda Isgaarsiinta ee Israaiil Ayuub Qarraa; ayaa ka dalbaday hay’adaha kale ee sida gaarka ah arrintani u quseyso in ay fartoomaan go’aanka mamnuucidda howlgalka telefeshinka LAjasiira ee gudaha Israaiil.
Waxa uu ku dhaliilay Telefeshina Aljasiira in uu taageero, dhiirrigeliyo shaqaaqada ka dhabka ah Israaiil.
Wasiirka Isgaarsiinta ee Israail ayaa sheegay in shirkadaha bixiya adeegga baahinta telefeshinka Aljasiira ee gudaha Israaiil ay ogolaadeen in ay joojiyaan baahinta adeegga baahinta Telefeshinka Aljasiira.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in xiridda Kanaalada ALjasiira eek u yaal magaalada Quddus uu u baahan yihiin xeerdejin dheere ah, sidaas awgeedna ay xukuumaddu horgeynaso hindise sharciyeed golaha Kanesadka kaas oo ku saabsna mamnuucida telefeshinka Aljasiira.
Telefeshinka Aljasiira oo laga leeyaha waddanka yare e Qadar; ayaa sheegtay in Tebiyeyaasheeda ku sugan Israaiil loo diiday in ay ka qaybgalaan shirka jaraaid ee lagu shaaciyey warka ka soo baxay Wasaaradda isgaarsiinta ee Israaiil.
Xigasho:laanta Af-Soomaaliga Ah Ee BBC